Mpanamboatra sy mpamatsy vatom-bato excavator China | MINYAN
Raha ampitahaina amin'ny siny fanamafisana dia matanjaka sy azo itokisana kokoa ny siny vato. Ny siny vato excavator dia mampifanaraka ny lovia matevina, ny eo ambany dia ampio ny lovia manamafy, ampio ny takelaka mpiambina ny sisiny, apetraho ny takelaka mpiambina sisin-tany, mpihazona nify siny mahery, mety amin'ny fotoana anaovana ana-be, toy ny vatokely,
Ny siny vato excavator dia mampifanaraka ny lovia matevina, ny eo ambany dia ampio ny lovia manamafy, ampio ny takelaka mpiambina ny sisiny, apetraho ny takelaka mpiambina sisin-tany, mpihazona nify siny mahery, mety amin'ny fotoana anaovana akanjo lava, toy ny fitrandrahana vatokely, granite ary bière ao anaty asa mafy. Ohatra: Ny fepetra mihady izay misy ny fiainana an-tendrony manomboka amin'ny 200 ka hatramin'ny 400 ora miaraka amin'ny toro-hevitra Penetration Plus. Ny takelaka fanaovana akanjo eto ambany dia eo amin'ny 50% eo ho eo noho ny Heavy Duty Buckets.
Ny takelaka fanaovana sisiny dia manodidina ny 40% lehibe kokoa noho ny excavator manamafy ny siny eto an-tany mba hiarovana anao amin'ny fitafiana mahery vaika sy gouging. Adaptatera sy torohevitra dia refesina mba hitondrana ny entana mavesatra kokoa sy ny abrasion.
Ny sidebars dia atsofoka mialoha ho an'ny mpikapa amin'ny sisiny sy mpiaro sisiny ho an'ny siny lehibe kokoa.
Fonosana sy famoahana: Minyan Bucket dia manana ekipa matihanina amin'ny famonosana sy famoahana siny ho fitoerany.Fantatray ny famerana lanja ho an'ny firenena, fantatray ny fomba hitsitsiana habaka amin'ny famoahana vokatra bebe kokoa ao anaty kaontenera iray mba hamonjy ny entan'ny ranomasina ho an'ny mpanjifa.Ary mampiasa sarimihetsika plastika izahay mba hiarovana ny siny amin'ny orana sy feno vovoka amin'ny fandefasana LCL. Asio landihazo eo anelanelan'ny siny mba hiarovana ny sary hosodoko. Mampiasà fehikibo matanjaka mba hamehezana siny amin'ny paeta hisorohana ny siny mihozongozona sy hianjera mandritra ny fandefasana.
Inona no fitaovana ampiasainay?* Q355B ho an'ny tontolon'ny asa maivana mba hanampiana ny mpanjifa hitsitsy vola, ohatra: Mihady solona, ​​hady, fotaka, fasika, loto.* NM460 ho an'ny asa mavesatra ampiasaina amin'ny ampahany amin'ny fanafihana, toy ny, fanapahana, fehin-kibo ambany, ary takelaka mitafy.* Bislloy avy any Aostralia, ho an'ny tontolo iasanao miasa mafy dia manome fiarovana tsara dia tsara ny Bucket, mazava ho azy fa somary avo kokoa ny vidiny* HARDOX avy any Suède, fitaovana matanjaka No. 1, ho an'ny mpanjifa fitakiana manokana ihany ary tsy miraharaha ny vidiny loatraMinyan dia orinasa manana traikefa bebe kokoa ahafahana miraiki-po amin'ny Excavator, manana ekipa injenierantsika manokana, ekipa mpivarotra, ekipa fonosana sy entana ary mpiasa maherin'ny 100 handoa 100% ny saina hananganana vokatra tsara kalitao 100%Ny orinasanay: XUZHOU MINYAN IMPORT & EXPORT CO., LTDNy toerana misy anay: faritanin'i Xuzhou Jiangsu, tobin'ny milina fananganana lehibe indrindra ao Shina.Ny vokatray: EXCAVATOR ROCK BUCKET, EXCAVATOR EARTHMOVING BUCKET, EXCAVATOR SIEVE BUCKET, BUCKET TEETH, EXCAVATOR RIPPER, EXCAVATOR QUICK COUPLER, ny vokatray dia mety amin'ny karazana maodely excavator rehetra. Toy ny CAT, XCMG, KOMATSU, BOBCAT, SHANTUI, HYUNDAINy toeran'ny mpanjifanay: Aostralia, Amerika, Kanada, Panama, Brezila, Peroa, Ekoatora, Uruguay, Paraguay, Russia, Sweden Sweden, Chile, France, Algeria, Angola, South Africa, India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Singapore, Philippines sns.Tsy mitsahatra mihatsara izahay, maniry ny ho tsara indrindra amin'ity indostria ity, mba ho mahatoky ianao mpanamboatra Excavator Bucket.
Fahaizana manome:300 Piece / Pieces isam-bolana bucket excavatorFonosana & hanafakaAntsipirian'ny fonosanapaleta hazo hamonosana ny siny excavatorManisy seranan-tsamboLianyungang / Qingdao / Shanghai
Quantity (Pieces) 1 - 5 6 - 10 11 - 20 > 20
Est. Time (andro) 15 20 30 Hifampiraharahana
Adapter, Nify, mpanapaka amin'ny lafiny
Ampiasaina indrindra amin'ny fihadiana sy fasika, vatokely ary
tany sy tontolo iainana maivana.
Ampiasaina indrindra amin'ny fihadiana tany mafy, afangaro amin'ny a
vato malefaka sy tanimanga somary malefaka, vato malemy kokoa ary
tontolo iainana mavesatra hazavana hafa.
Adaptatera, nify, mpanapaka lafiny /
Ampiasaina indrindra amin'ny fitrandrahana vatokely mafy afangaro
tany mafy, vato mafy na vatolampy, rehefa afaka
fipoahana na famoahana entana, ary enta-mavesatra.
Adaptatera, Nify, mpiaro ny sisiny, lamba firakotra
Ampiasaina indrindra amin'ny toe-piainana avo indrindra
anisan'izany ny granite quartzite avo, potipotika,
sandstone sy ore.
Ampiasaina amin'ny tontolon'ny asa maivana miaraka amin'ny kely
Natao ho an'ny tontolo iainana ony, dobo ary hady.
Natao ho an'ny asa fanadiovana amin'ny fantsona sy tatatra.
Nampiasaina tamin'ny fampidirana sieving sy excavation
amin'ny akora somary malalaka.
NAOTY: Misy OEM na Manamboatra Customizable
Fisarahana siny: antsipiriany etsy ambany
ho an'ny tanjaka avo sy fampisehoana
nifanaraka tamin'ny herin'ilay milina. Pin
misy na hinge voatokana misy,
2. Takelaka misy takelaka
Mandehana amin'ny fantsom-pohy ho tsara kokoa
fizarana entana sy faharetana.
Voaofana mialoha mba hanampiana fiarovana amin'ny sisisy.
4. Takelaka an-daniny
5. Takelaka mitafy sisiny
Mifanaraka amin'ny farany ambany ny takelaka
manaova takelaka ho an'ny zorony tsy misy seam
fiarovana. * vy mahery
ampiasaina amin'ny fiarovana fanampiny.
Mahitsy na "spade", miankina amin'ny
Ho an'ny henjana farany ambony.
8. Vondrona Adjuster
Ahafahana fanitsiana mora amin'ny akanjo
eo anelanelan'ny tehina sy ny siny.
9. Nify (Torohevitra)
Sandoka avy amin'ny vy miaraka amin'ny fananana
izay mitazona ny hamafin'ny akanjo lava
fiainana amin'ny fampiharana mihady henjana
10. Mpanenjika sy mpiaro sidebar
Ho fiarovana sy hidirana.
11. Adaptor 2-Strap
Ny endrika radius roa, mampitombo ny fahazoana voditongotra ary manatsara ny akanjo.
13. Takelaka mitafy ambany marindrano
Miaro ny faritra fonosana ary manamafy, siny ho an'ny tanjaka lehibe sy henjana. Nosoloina mora foana.
14. Avo maso
Famolavolana maso lehibe kokoa sy mahia kokoa ho an'ny fifamatorana amina gadra mora.
Ny siny dia mety amin'ny fepetra miasa manaraka.
Misafidy ny faharetana mety
Ny fisafidianana ny siny diso dia mampihena mora foana ny famokarana, ary mampitombo ny vidin'ny fandidiana 10-20% na mihoatra. Izy io koa dia mety hiteraka akanjo sy harerahana tsy ilaina amin'ny masinina sy ny siny.
Ho an'ny toe-piainana avo indrindra anisan'izany ny granite quartzite avo. Ohatra: Toe-javatra mihady izay kely kokoa ny fiainana tendro
noho ny na mitovy amin'ny 200 ora miaraka amin'ny toro-hevitra Extra Duty. Ny bucket dute Extreme dia voaro amin'ny fiarovana fanampiny amin'ny akanjo fanakorontanana sy ny lamba fanakonana. Anisan'izany ny: Corner Shrouds [A], Sidebar Protenders misy shear Blocks [B], fitaovana fitafiana fanampiny eo amin'ny sisiny [C], ary Base Edge End Protenders [D]
Mbola misy fiarovana bebe kokoa aza ho an'ny siny amin'ny masinina lehibe kokoa. misy siny koa: Liner [E], Segment Base Edge [F] ary Takelaka Wear (MAWP) (MAWPs) (MAWP tsy hita. Eo ambany faran'ny siny no misy ny takelaka.) Lehibe kokoa ny takelaka anaovan'ny sisiny; ary ny Adaptatera sy ny torohevitra dia refesina mba hitondrana ny fepetra mavesatra kokoa sy ny abrasion.
Previous: baoty mandoto tany
Manaraka: siny sioka excavator